सरकारको विरोध र अपव्याख्या गर्ने होडबाजी चलेको छ: युवासंघ अध्यक्ष
तत्कालीन एमालेको भातृ संगठन युवासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन्, रमेश पौडेल । ३ जेठमा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणपछि दुवै दलका भातृ संगठनहरू युवा संघ र वाईसीएल पनि एकीकृत हुने क्रममा छन् । दुई संगठनको एकता र सरकारका काम–कारवाहीलाई लिएर सडकमा भइरहेको विरोधबारे पौडेलसँग नेपाल समयले गरेको कुराकानी :
युवा संघ र वाईसीएल आपसमा भिड्थे । अब मिल्न लाग्दा कत्तिको कठिन छ ?
कठिन छैन, हामी निश्चित विचार, दर्शन र कार्यक्रमका आधारमा बनेका राजनीतिक संगठन हौं । पार्टीले दिएको कार्यदिशा र निर्देशन नै हाम्रो विधि हो । पार्टीको नीतिअनुसार नै हामी सञ्चालित भएका हौं। पार्टीले मिल्नुपर्छ भन्दा हामीलाई कुनै आपत्ती छैन ।
दुई संगठनमा एकता प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?
हामीले विधानको मस्यौदा लगभग तयार गरिसकेका छौं। मस्यौदा उपसमितिले कार्यदललाई विधानको मस्यौदा बुझाइसकेको छ ।
कार्यदलमा चार जना छौं, मणि थापा, महेन्द्र पाण्डे, रमेश पौडेल र रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा । दुई अध्यक्ष र दुई इन्चार्जको कार्यदलले विधान मस्यौदा तयार गरेको हो । नाम के रहने, संख्या कति हुने र स्थापना कहिलेलाई मान्ने, २००८ कि २०४७, झण्डा कुन रहने भन्ने विषय टुंग्याउन बाँकी छ । धेरै विषयमा सहमति भइसकेको छ ।
एकीकरण कहिलेसम्म होला?
एकीकरण साउनभित्र लगभग गरिसक्ने तयारीमा छौं ।
आफ्नो पार्टी सरकारमा रहेकाले सडकमा आउनु परेको छैन । एजेन्डा के छन् त अहिले?
हामीले अधिकारको आन्दोलनलाई संविधान निर्माणसँगै संस्थागत गरेका छौं। संविधानले हाम्रा अधिकारका मुद्दा स्थापित ग¥यो । अब अधिकार रक्षाका लागि जिन्दावाद, मुर्दावाद भन्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने नारालाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाएका छांै । अब युवाको समग्र मुद्दामा युवा संघ क्रियाशील रहनेछ ।
सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ, युवासंघ भने मौन देखिन्छ नि?
केही मान्छे विपक्षी देख्नेबित्तिकै आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अगाडि बढेको पाइन्छ । कांग्रेस देख्दा आलोचना, कम्युनिस्ट देख्दा आलोचना । त्यो अर्को पार्टीको हो, त्यसैले आलोचना गर्नुपर्ने । त्यस्तो बनिबनाऊ मानसिकता बेला–बेलामा परिचालित हुन्छ ।
सरकार बनेको चार महिना भयो । बजेट आएको छ, कार्र्यान्वयनका क्रममा छ । यो कुनै जादुको छडी त होइन । हरेक कुराको समय सीमा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले समृद्धिको मिसनलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने जुन सपना लिनुभएको छ, त्यसलाई आम नेपालीले साथ दिन जरुरी छ ।
देशलाई सधैं गरिबीमा राख्नु र रहन दिनु हुँदैन । प्राकृतिक रूपमा हामी सम्पन्न छौं । नेपाल जलविद्युत्बाट मात्र पनि समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । प्राकृतिक विविधता भएको हाम्रो मुलुकले पर्यटनबाट समेत प्रगति गर्न सक्छ । कृषिबाट नेपालले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ। अब पनि हामी गरिबीमा रहन सक्दैनौं । त्यसैले सरकार समृद्धिको मिसनमा लागेको छ ।
कतिपयले यो मिसन पूरा भए कम्युनिस्ट सरकार सफल हुन्छ, लामो समय कम्युनिस्टको शासन रहन्छ भन्ने भयले कम्युनिस्ट फोबिया फैलाइरहेका छन् । कम्युनिस्ट गठबन्धनले बहुमत पाएदेखि केही समूह नै त्यसविरुद्ध लागेका छन् ।
कुनै विकास योजनाको विरोध गरिहाल्ने र अपव्याख्या गर्ने होडबाजी पछिल्लो समय मौलाएको छ । सरकार सफल भए आफूले खाईपाई आएको खोसिन्छ भन्ने भयले यस्तो गरिएको हो भन्ने लाग्छ । यो समस्यालाई सरकारले चिर्नुपर्छ ।
सरकारप्रति असन्तुष्टी बढेको देखिन्छ । डा. गोविन्द केसीको अनशनमा युवासंघको धारणा के हो?
यो आन्दोलनमा केही मात्र वास्तविक डाक्टर छन् । तर, आन्दोलनमा नक्कली डाक्टरको समेत सहभागिता छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले डाक्टर केसीलाई समस्या समाधानका लागि चिकित्सा आयोगको अध्यक्ष बन्न आग्रह गर्नुभएको छ । मुलुक समृद्ध बनाउन प्रधानमन्त्रीले डा. केसीलाई यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै लोभलालच छैन, उहाँको एउटै मिसन छ, मुलुक बनाउने । तर, केही समूह यो सरकारलाई असफल बनाउन लागिपरेका छन् ।
युरोपियन युनियनको पैसा खाएर एक जना मान्छे अहिले लोकतन्त्रको पाठ पढाउँदै हिँडेका छन् । जिन्दगीभर लोकतन्त्रका लागि लडेका व्यक्तिलाई जागिर खाएर, पैसा कमाएर लोकतन्त्रको पाठ सिकाउँदै हिँड्न सुहाउँदैन । गगन थापा र सुशीला कार्कीले कांग्रेसको पक्षमा प्रयोग भएर गरेका तर्कको कुनै अर्थ छैन।